Fampiorenana sy fandidiana HomePod, macOS 7 beta 10.13.4, 200GB ao amin'ny iCloud ho an'ny fanabeazana, kojakoja mainty iMac Pro amidy, ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Hofaranantsika amin'ny alàlan'ny fanangonana vaovao ity herinandro ity izay ahafahanao misintona minitra vitsy aorian'ny mety hiverenana amin'ny zava-misy aorian'ny herinandro na andro vitsivitsy hiala amin'ny Paska. Fotoana izao hiverenana amin'ny fiainana andavan'andro ary any Soy de Mac dia manohy manao izany isika ny asanay dia ny mitazona anao haharaka ny zava-drehetra mitranga eo amin'ny tontolon'ny paoma manaikitra.
Nandritra io Paska io dia nanao hetsika somary tsy nitovy tamin'ny fanaony matetika tao amin'ny Keynote i Apple ary natao ho an'ny sehatry ny fanabeazana fotsiny ilay hetsika. Porofon'izany dia ny hany zavatra natolotra teo amin'ny sehatry ny fitaovana dia ny iPad 2018, antsasaky ny iPad eo anelanelan'ny iPad sy ny iPad Pro. IPad iray izay miompana indrindra amin'ny sehatry ny fanabeazana.
Vantany vao manokatra ianao ary manomboka mampiasa HomePod ianaoTsapanao fa asa mahafinaritra nataon'i Apple tamin'ity mpandahateny kely sy mahafinaritra ity. Efa nolazaiko anao ny zavatra voalohany tokony nianarako hatao, dia ny famerenana amin'ny laoniny ny HomePod ho any amin'ny toeran'ny orinasa. ary izany ve rehefa apetrakao amin'ny tamba-jotra WiFi, rehefa afindrao amin'ny toerana vaovao misy tamba-jotra WiFi hafa ianao dia mila amboarinao indray ny asany.
TSY mandeha ny HomePod raha tsy misy tambajotra WiFi tafiditra ary izy io dia mitondra tena toy ny fitaovana hafa ankoatry ny iPhone, Mac na MacBook. Rehefa manao ny fanamboarana voalohany ho an'ny HomePod hanomboka miasa isika, ny tena ataontsika dia mampifandray azy amin'ny Apple ID.
Apple dia nanambara volana vitsivitsy lasa izay Apple PayCash, fa hatramin'izao, mbola tsy nanao ny famoahana ofisialy eran-tany ry zalahy Cupertino, toy ny any Etazonia ihany no misy. Ity fomba vaovao ity dia hahafahanao mandefa vola haingana sy mora amin'ny alàlan'ny iPhone.
Azo inoana fa amin'ny alàlan'ny fanombohana ny iOS 11.3 ity fomba fandoavambola ity dia hampiharina indray mandeha sy ho an'ny rehetra any amin'ny firenena izay tsy misy azy io. Volana maro lasa izay, hitantsika ny fomba nanararaotan'ireo mpampiasa sasany ampandehano ity serivisy ity, saingy tsy misy lavitra ny marina, satria raha tsy ampandehanana dia tsy azontsika ampiasaina amin'ny fomba ofisialy.
Toa izany amin'izao fotoana izao tsy maintsy miandry foana isika amin'ny kinova farany an'ny macOS 10.13.4, hatramin'ny namoahan'ireo tovolahy avy any Cupertino tamin'ity herinandro ity ny Beta faha-XNUMX amin'ny fanavaozana macOS lehibe manaraka, fanavaozana lehibe izay ho avy amin'ny tanan'ny iOS 11.3, hahafahana manararaotra ampahany amin'ny vaovao izay toy ny fampifanarahana ny hafatra amin'ny alàlan'ny iCloud.
Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy ny mpamorona hijery izany, Tsy fantatsika hoe inona ny vaovao entin'ity beta fahafito ity amintsika ho an'ny mpamorona, fa ny azo inoana dia kinova GM an'ny macOS 10.13.4, noho izany dia tsy hisy izany vaovao izany.
Elaela ny fotoana nanatanterahan'i Apple ny hetsika 27 martsa nanambara izay efa fantatsika momba ireo tsaho niely nanerana ny tambajotran'ireo tambajotra nandritra ny andro vitsivitsy izao iPad vaovao 2018 misy Touch ID ary mifanaraka amin'ny Apple Pencil.
Hatramin'izao, ny iPad izay nifanaraka tamin'ny Apple Pencil dia ny iPad Pro, mamela ny iPad Air taloha tsy hifanaraka ary ny iPad mora vidy izay hapetrany eny an-tsena eo akaikin'ny IPad Pro 10,5-inch.
Manohy mitatitra ny vaovao natombok'i Apple tamin'ny hetsika fanabeazana nataony izahay ary tamin'ity indray mitoraka ity dia izy ireo mifandraika amin'ny habaka iCloud ireo mpianatra manana ID Apple dia hanana manomboka izao ary, noho izany, dia mampiasa fitaovana Apple ao am-pianarana. Araka ny efa fantatrao, ny toerana malalaka nananan'ny mpampiasa Apple tao amin'ny iCloud mandraka ankehitriny dia 5GB, Tsy fahaizana ampy anio raha mampiasa iPad na Mac mavesatra ianao amin'ny fianaranao.
Apple dia maniry ny hitohizan'ny famarotana azy ireo ary noho izany dia nanapa-kevitra izy ireo fa ny mpianatra sy ny mpampianatra dia manana fisondrotana ny fetra GB maimaim-poana misy ao amin'ny iCloud. Raha izany dia, Manomboka izao dia hanana habakabaka 200 GB mamela azy ireo hitahiry ny fitaovany any an-tsekoly rehetra ao amin'io toerana io izy ireo.
Namidy i Apple tamin'ny farany ireo kinova vaovao momba ny kojakoja izay mandraka ankehitriny dia nanjary fenitra ihany rehefa nividy iMac Pro izay, araka ny efa fantatrao, dia novokarina voalohany tamin'ny alimina volondavenona. Rehefa namidy ny iMac Pro vaovao dia takatsika rehetra fa nanangana maodely vaovao ho an'ny Magic Keyboard ny olona Cupertino miaraka amina keypad nomerika miloko fotsy, Magic Mouse miaraka amin'ny alim-pito mainty sy habakabaka alim-bolo ary Magic Trackpad misy vera mainty sy alim-pito volondavenona.
Rehefa vita ny hetsika fampisehoana an'ny iPad 2018 vaovao, Ry zalahy Cupertino namoaka fanavaozam-baovao vaovao tao amin'ny efitrano fiasan'ny iWorks, izay ahitantsika ny Pejy, Nomery ary Keynote. Ny antony lehibe indrindra fandefasana ity fanavaozana vaovao ity dia ampifanaraho ny vaovao natolotr'i Apple nandritra ny hetsika farany, hetsika mikendry ny fanabeazana ary te-ho tondroina indray i Apple.
Ary milaza aho fa te-ho referansa indray, satria tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nahita ny fomba Google amin'ny Pixelbooks tantanan'ny Chrome OS i Apple nanjary sehatra nisafidy ho an'ny mpianatra sy ny mpampianatra, amin'ny ampahany noho ny vidiny, satria ireo karazana vokatra ireo dia misy eny an-tsena eo amin'ny 200 $ eo ho eo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Fametrahana sy fiasa HomePod, macOS 7 beta 10.13.4, 200GB ao amin'ny iCloud ho an'ny fanabeazana, kojakoja mainty iMac Pro amidy, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
jorge acevedo dia hoy izy:
Toa ny sehatry ny fanabeazana izay hanana habaka amin'ny rahona 200 GB dia i Etazonia ihany. Ho fanampin'izay, tsy maintsy angatahin'ireo andrim-panjakana ireo toerana ireo fa tsy olona. Tsy vaovao tsara ho an'ny mpampianatra mipetraka any ivelan'i Etazonia izany.
Valiny tamin'i Jorge Acevedo
Bean, mpanodin-teny maimaimpoana ho an'ny Mac